Paul Scholes Oo Ka Sheekeeyay Qaabkii Mousa Dembélé & Gareth Bale Ay Ugu Qasbeen In Uu Ciyaaraha Kubbada Cagta Gabi Ahaanba Ka Fadhiistay | Saxil News Network
Paul Scholes Oo Ka Sheekeeyay Qaabkii Mousa Dembélé & Gareth Bale Ay Ugu Qasbeen In Uu Ciyaaraha Kubbada Cagta Gabi Ahaanba Ka Fadhiistay
Halyayga kooxda Manchester United iyo xulka qaranka England ee Paul Scholes ayaa ka hadlay go’aankii uu kaga soo laabtay kadib markii uu ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubada cagta sanadii 2012, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kadib kulankii xalay ee FA Cup ee kooxaha Manchester United iyo Huddersfield.
Geesigii hore ee garoonka Old Trafford Paul Scholes ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubada cagta bishii May 2011, ka hor inta uusan markale badalin go’aankiisa bishii January 2012 wuxuuna dib ugu soo laabtay garoomada si uu u badbaadiyo inkaarta ka jirtay khadka dhexe ee kooxda Manchester United uu xiligaas hogaaminayay Sir Alex Ferguson, wuxuuna 43 jirkan bilawga soo laabashadiisa labaad uu gool ka dhaliyay kooxda ay daris wadaaga yihiin ee Manchester City.
Paul Scholes oo haatan falaqeeye ka ah BT Sport ayaa isaga oo arintan ka hadlaya yidhi: “Xili ciyaareedkii 2011-12 wuxuu ahaa mid aad u cajiibadnaa, ugu yaraan waxaan ku dhawaanay inaan ku guuleysano horyaalka Premier League, laakiin Manchester City ayaa si toos ah gacanta ugu dhigtay kadib goolkii niyad jabka ahaa uu dhaliyay Sergio Aguero daqiiqadii ugu danbeysay. Waxaan runtii xiligaas ka shalaayay dib ugu soo laabashadeyda garoomada, laakiin Ferguson wuxuu markale isiiyay sanad kale oo dheeri ah, kahor inta aanan si rasmi ah kaga fariisan gabi ahaanba kubada cagta”.
Scholes oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaan sidoo kale xasuustaa kulankii aan Tottenham kula ciyaarnay garoonkeena Old Trafford, wuxuu ahaa kulankii 3-aad ama 4-aad ee aan ka ciyaarnay xili ciyaareedka, waxaan la kulanay guuldaro 2-3 anaga oo ku dhex sugan jamaahiirtayada”.
Scholes ayaa intaa kadib ka hhadlay sida Gareth Bale iyo Mousa Dembele ay markale ugu qasbeen in uu ciyaaraha ka fadhiisto wuxuuna yidhi: “waxaan kulankaas u ciyaaray si wanaagsan, laakiin waxaan xasuustaa sida uu Mousa Dembélé tiro laba jeer ah ii dhaafay, sidoo kale Gareth Bale ayaan sidaas kala kulmay”.
Scholes oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “si wanaagsan ayaan u ogaa sida fudud ay dadka ugu gambin karaan, waxaan isku dayay in markale aan ku dhawaaqo ka fariisashadeyda garoomada waliba waqti hor ee xili ciyaareedkaas, laakiin waxay ila muuqatay in aan noqon lahaa mid nacas ah hadii aanan qaadan lahayn go’aanka sidaas oo kale”.